RAKOTOARIVONY JEAN PIERRE : FANJAKANA TSY MAHAVITA AZY NO MISY ETO – MyDago.com aime Madagascar
Nivoaka tamin’ny gazety mpiseho isan’andro iray teto an-drenivohitra androany, fa nesorina ary natokana amin’ny toerana arahimaso ny filoha Ravalomanana. Nitondra fanazavana tamin’ny vahoaka teny amin’ny kianajn’ny Magro Behoririka androany, andriamatoa Rakotoarivony Jean Pierre. Ny tena marina hoy izy, dia mbola misy tsy vanombanom-pisainana eto amintsika. Misy milaza fa hihavana kanefa ny kobay an-kelika ihany. Nisy olona fito hoy Jean Pierre, nitory tany amin’ny fitsarana tsy miankina tany Afrika Atsimo, izay milaza fa esory ary aza avela hihetsiketsika amin’ny toerany ny filoha Ravalomanana. Tsy manana fahefana hanao izany hoy izy, ny fahefana misy any an-toerana raha tsy mandeha amin’ny ambaratonga samihafa izany.Mora alana anefa izany fingampingana ataon’ny sasany izany. Aza manahy na kely akory aza isika hoy ity mpanao politika ity, fa fomban’ny olona efa resy no manao izany fa tsy maintsy mody ary lany ny filoha Ravalomanana. Tamin’ity tetezamita ity, hoy izy, dia rehefa ampiharina ny andininy ao amin’ny tondrozotra dia tsy manomboka any amin’ny andininy voalohany. Momba ny zavamisy any Atsimo kosa dia nambarany fa faty olona mikararana no misy any fa tsy fandriampahalemana. Ny ankolafy Ravalomanana hoy Jean Pierre, dia efa niteny hatramin’izay fa tsy izy io ary tsy rariny, kanefa nanao bemarenina ny mpitondra. Fanjakana tsy mahavita azy no misy eto matoa misy faty olona tahaka izao.
29 réflexions sur « RAKOTOARIVONY JEAN PIERRE : FANJAKANA TSY MAHAVITA AZY NO MISY ETO »
gaigy izany!fa ngah tsy voavidin,i dada ndray ry sadika sy zoma?
Izaho koa dia manamafy fa tsy mampiontsona ny volomasoko akory izany,
ary SAMBATRA HONO IZAY ENJEHANA noho ny fahamarinana, OLON’ANDRIAMANITRA INY
OAH!!!aoka isika tsy hanary toky fa NY MARINA TSY MBA MATY!!!!HOMBA ANTSIKA ANDRIAMANITRA!!!
resa-poza tsy mahagaga e « kaka aza lazainy gateau »
12 septembre 2012 à 20 h 02 min
IZAO NO HATAO TETIKA AVO LENTA,iza no nahavoa ???.
Tsy hoe milavo lefona ,fa ny marina no mila mbanjinina mafy ,hafahana mandray ny fepetra tena izy .
Fa tokony mbola ho vao vao aminareo ve izao e!!!
izay mety ho lemeny no malemy @’izao fa tsy i Dada velively.
tsy zakan’ny tsenany mihintsy ilay dada nandray andraikitra ary mbola mijoro na inona antsojay na inona.
Avelao hianakendry eo ihany fa tsy ho zakan’ireo anie ny ho valin’izao e!!!!OLON’ANDRIAMANITRA INY!!!
tsy i dada ihany no tsinotsiniavan’ireo fa IZAO TONTOLO IZAO MIHINTSY ka leo handeha HO TAZAMINA.
Ranoetra dit :
mba jereo ao @ youtube ity fa io no mamaly ilay hoe fanjakana tsy mahavita azy no misy eto.adiresy soratana ao @ youtube : Vaovao foza mafana.mpg. Misaotra tompoko
Tonga dia haarako!!hi!hi!hi!!!!misaotra tompoko!!
Izy io raha araky ny fiheverako azy dia tsy Zuma na ny SADC no maninona fa tany demokratika i AFS ary noho izany dia manadanja ihany koa ny opposition ary ireo no ataon’i Rajoelina izay handemena azy ka mitranga izao zavatra izao.
Fa ny atao an-tsaina dia:
a./ny tondrozotra ihany no manankery eo anoloan’izany.
b./Tsy misy porofo hoe izy no tompon’andraikitra tamin’ireny tranga tamin’ireny 7 febroary ireny.
Ka noho izany dia fampitahorana fotsiny izany.
Ilay domelina sy ratsikirity ve???ha!ha!ha!!!
miteny hoa azy ny sary!!!MAZAVA BE na tsy misy jiro aza!!
Avelao hianakendry eo ihany oah!!ho ratsy ny fiafaran’ity tantara ity ary tsy ho zakan’ireo.
tsy mahitatory koa angaha ny akama???izaho tsy dia taitra fa fomban’ny foza ihany ity
mianakendry mandemy olona ity ,efa tsy hatao mahataitra izany.
Ny porofo dia efa MAZAVA fa natao sorona ny vahaoka mba hangalarana ilay sezan’i dada fa tsy afaka teo i dada raha
tsy nisy ireny VONOMOKA ireny satria MAMIM-BAHOAKA LOTRA IZY sady MANANA NY RARINY ARY NAHAAVITA!!!
efa izao tontolo izao no miaky io fa asakasak’izay te hiadaladala hitonon-tena toa lolofotsy eo???
f’angaha moa tsy efa nitory i Dada t@’ireny Charles ilay nanao amapamoaka ireny???
Dia angaha koa tsy hoe efa nosintomin’i AV7 indray ilay fitoriana???tsy azoko??azafady fa toy ireo no vao2 henoko aloha??
Nisonton’ny AV7 ilay fitoriana fa raha tsy diso aho dia nisy olona hafa na ny fitsarana amin’io toerana io no nitazona ilay izy mba hanaovana tsindry amin’i Zuma daholo izany fa tsy meloka mihintsy i Zuma amin’io resaka io.Izay aloha no fahazahoako azy.
13 septembre 2012 à 6 h 07 min
A la guerre comme à la guerre hoy ny fitenin’ny firantay. Milalao amboakely ireo manohana an’io fitondrana foza io ka mbola ho lanin’ny amboakeliny atsy ho atsy. Tany Lybie ny benkintana dia niseo milay nanohana foza hanonganana an’i Kadafy kanjo ireo foza ireo ihany no namono azy omaly.
Tsy maintsy mivoaka eo ihany ny marina fa tsy mety maty izany. Aoka tsy hikoropaka isika fa ny Marina momba antsika hatreto. Somary mitavozavoza angamba no fijerin’ny sasany azy kanefa dia mbola tsy lavo hatramin’izao fa mijoro eny foana.
Mitohy ny tolona. Haloan’ny tantara ireo mpamadika tanindrazana ireo fa tsy haharitra eo. Efa miha feno ny takotra izao, tsy ho ela dia ho masaka ny vary.
Inona ary no mampikoropaka anareo ?
Ny fitsarana mahaleo tena any Afrika atsimo indray ve no homentsika tsiny ? Tsy misy Christine intsony anie any e !
Aleo ny fitsarana Sud Af. hanao ny asany fa aza asiana commentaires betsaka raha mahatoky isika.
Isika koa toa zatra manao fitsarana alohan’ny fotoana rehefa tsy mifanaraka @ mahamety antsika koa !
Lany zao ny prezida RAVALOMANA tao @ FJKM na tsy eto an toerana aza ka inona no olana ?
Koa na any Sud Af. aza ny prezida RAVALOMANA dia aza misy matahotra fa ho lany filoha pirenena foana indrindra fa misy an’io tribonaly afrikanina tatsimo io izay tsy voavidin’ny volan’ny FOZA.
Raha manao ny marina dia aza mahina @ ratsy natao zany mihitsy. Fa matoa ianao no mikoropaka alohan’ny fotoana dia tratran’ny olona mora foana ny ratsy nataonao.
Misaotra @’ilay valiny ry akama a!!
Dia mbola ho tohizako ilay fanontaniana, fa iza ireo toa hoe nanao
fanadiadiana tonga tao Dago @ momba ilay raharaha 7 fev???
Tsy ilay fitsarana no inona fa faftatra tsara fa SOTASOTA ilay izy fa tsy misy
matahotra izay fitsara-poza mihintsy, ilay fanaovana fitaovana ilay resaka HITSARANA
an’i dada eo @ fotoana tokony hodiany no mipetraka ny olana, fa marina fa mino tokoa aho fa na tsy ao aza i dada dia tsy
maintsy ho fidiana ary ho lany.
Allo allo, « Radio HoAiza » !
Lazao ny vahoaka fa raha avela hisokatra ho azy ny aéroport, dia rahariva ihany izy dia tonga ! Ny pasipaoriny dia efa vonona tahak’azy, ary ENY AMPELAN-TANANY !!!
Omaly maraina izy hoy aho, dia mbola nivory niaraka tamin’ny Troïka tany le Cap !
Ny fanaratsiana, ny fandotoana na fanosoram-potaka dia mitohy foana ! Tsy mitombona ny fanenjehana ; ary raha ny zavatra niseho farany no dinihina, dia ry foza sy ilay mpisolo-vavany no azo lazina hoe « plaideurs vexatoires » !
Tsy misy hetsika tokony atao ve, fa dia raha voafelaka ny takolaka ilany, dia ho tolorana foana ve ny iray ? Marina fa kristianina ary mpivavaka ISIKA !
Tsara ny manaraka an’izay voasoratra ao anatin’ny Soratra masina, kanefa tsy anjaran-tsika no mianatra na haka tahaka an’i Jesosy ka hanaiky fotsiny ho tombohina amin’ny hazo-pijaliana !
Olon’Andriamanitra marina isika, sa moa tena hoe badolahy sy badovavin’Andriamanitra !
AZA MISY MIHETSIKA IHANY !!
Aza DIA MENATRA miaro ny Tanindrazana sy ny vahoaka malagasy ê !
Ny tanjona amin’ity fitoriana ity dia izao , ry FAT efa mahalala fa tsy marina ny zavatra ataony fa endrikendrika fa any Afrika atsimo ny fitsarana dia tsy hidiran’ny fitondrana fa mahaleo tena tanteraka ary ny avocat dia masin-teny , izany hoe rehefa miteny ny avocat dia tonga dia ampiarina ny zavatra lazainy fa
dia tohizako eto indray ilay resaka fa rehefa avy eo ny voampanga vao manaporofo ny tena fahamarinany ,ny lafy tsarany izany dia : hiseho ho hitan’izao tontolo izao eo ny tena marina momban’ny fiampangana and- Ravalomanana.
Ny lafy ratsiny indray ary izay no tena tanjon’ny FAT dia tsy hafaka hody i Ravalomanana raha tsy vita ny fitsarana dia ho tara vao hody dia tsy afaka hilatsa ho fidiana , izay ilay izy.
Sady ilay fanekena ilay datim-pifidianana moa efa vita koa inona no hirarahiany an’izany
raha mbola tsy tanteraka koa ilay fifidianan dia mbola ny foza no eo ary mbola mitohy hatrany
ny fandrobana sy fangoronan-karena sy ny SORONA , mila sorona maro mihintsy ry zareo isaky ny hanao zavatra
satria asa maizina no hatao. Ka inona no hatao???eto ny fanontaniana no mipetraka, efa tara raha izao no hietsika,
ny vahoaka efa VIZANA, ry zareo efa MATEVINA, any aminy daholo ny SAOSY,voavidiny daholo , fa izay no nahagaga
t@’ilay fifidianan’ ny fiangonana teo ny nahalany azy dia tena mbola misitery lehibe, ANDRIAMANITRA irery ihany no
tsy VOAVIDINY fa ho avy izy !!!!MINOA FOTSINY IHANY!!!!
Na aiza na aiza rehefa mitory dia tsy maintsy mitondra porofo, entina manamarina ny fitoriana ! Na anjaran’izay henjehana no mitondra porofo voalohany !
Ohatra adaladala satria ianao io angamba vehivavy : Mandeha mitory an’i Rakoto ianao satria hoe naholany, any ka tsy virijiny intsony ; sitram-ponao sy Ranaivo izay sipanao anefa, no nahatonga anao…d’occasion !!
Hisy fiainana vanona ve, rahatoa ka hanao tahak’izany daholo ny vehivavy ???? Rehefa manàla-baraka, dia mpehana any !
Miady irery ny Filoha, kanefa zo, voninahitra ary ny Tanindrazanan’ny malagasy rehetra no tadiavin’ny sasany hitsakitsahina sy angalarina !!
Inona no atao ??? Tsy misy fa ny ankabeazan’ny malagasy mba tokony hianteherana, efa nivarotra ny tanindrazany koa, mba hazahoany paps ! Ny sasany mbola mikilandy dia tsy mety hivoaka avy ao anaty lavaka sao dia tsy mahazo paps eo koa! Ho an’arivony mantsy ireo hangataka paps satria hoe refizie pôlitika, na mangataka visa torisma dia iny sambo niletika !
Hiomehezan’ny rehetra isika ê ! Maro dia maro ireo maneso ny antillais ( Guadeloupe sy martinique ) hoe, miseho ho vazaha kokoa noho ny frantsay fotsy hoditra ; ny malagasy no tena mahamenatra, fa mpisolelelaka gravy be !
Misy adino ! Ary nankaiza daholo ? Nitsaoka sao dia…..!!!
Tahotra ny Filoha RAVALOMANANA : mandrovi-tsihy ny FATE.
LOHATENY AO @ tim-madagascar io .
Marina fa matahoatra an DRavalomanana I Rajoelina sy ny tariny ,Kanefa dia voahiliny atrany Andriamatoa Ravalomanana ary mety aharitra ela izany efa ho 4 taona izao .ary izany dia hiatraika @ fitiavan ny olona an dravalomanana.
Ka dia moramora ihany e!
Lazaivo fa mpanolana indray Ranaivo e!!!u
Ialah izao no tsy hita teo koh!!nitsidika vao maraina dia nilentika ka
io indray vao nipotra, sa iza no lazainao fa nitsoaka??tsy misy mitsaoka izany eto !!tsy misy miala eo!!!
Ao Ambatobe no misy miala fa tsy eto, isika anie taitra fa ny foza vao maika loza e!!!alohan’ny hanaovany
atsojay ohatra io izy dia efa fanina fa tsy AHAOMBY IDRAY satria dada mbola RAPIDA lavitra noho izy raha
hanao tatitra. MAHONENA!!!
On ne peut pas être au four et au moulin ê ! Raha mba fantatrao moa hoe taiza aho androany !
Efa niparitaka hatraiza hatraiza ny info ! Point de non retour io, ka dia ho hita eo ny FITIAVATANINDRAZAN-DRAMALAGASY !
Mahaheno ê, ilay fanaovan-tsonia ary aza mbola tsy vita, sahiran kely fotsin …
Efa voaparitaka aloha raha eo @ lafiny sary ny habibiana atosik’i Andry Rajoelina mitranga any atsimo
Marina loatra ny lazainao ireo km.
Dia ahoana ity:
ONTSA NY FO
latsaka kely ihany ny ranomaso
13 septembre 2012 à 19 h 47 min
Misy diso kely aloha ry HoAiza ny voasoratro â ! Raha namerina namaky izay nosoratako aho, dia hitako fa nisy zavatra diso ! Nentin’ny hatezerana loatra !
Post : 15h19
» TSY anjaran’izay henjehana no mitondra porofo voalohany » ! TSY no tiako soratana fa tsy NA !
Mino aho, fa tsy io no lazainao ho « marina loatra » ! Soa ihany fa hitako, ary miala tsiny amin’ny rehetra !
Mihinam-bary aza misy latsaka hoy ny ntaolo !
TOHIZO NY TOLONA, FA NY MARINA TSY AN’NY PHAT VELIVELY !!
Izao no atao hoe 1947 Bis ! Tsy vitan’ny atao hoe « rano » ny balan’ny fahavalo, dia ho lasa rano tokoa !
Précédent Article précédent : Message from President Marc Ravalomanana to the SADC Troika
Suivant Article suivant : VIVEMENT UNE ENQUETE INDEPENDANTE ET APPROFONDIE POUR FAIRE LA LUMIERE